mhando 0.6.7 – Chii chinotevera?
Zvita 18, 2010 kubudikidza chipo 23 Comments
Nezuro hatina kusunungurwa shanduro 0.6.7. Shanduro iyi zvinosanganisira mashomanana zviduku unocherekedza, zvose kuti kukwanisa kushandura zvakawanda mashoko apo Google haasi kuona mutauro panobva namazvo, uye kuti anokwanisa zvinosanganisira zvakananga Links kuti kunofambira mberi mafaira (avo achaita kuti 301 Redirect kuitika).
Zvisinei chii chinonyanya kukosha ndechokuti hatina pakupedzisira takwanisa zvakawanda zviitiko zvedu, uye akaisa rachulis zvizere Vapikisi rinotevera zvikuru shanduro Transposh – izvo zvichava 0.7. Ainyanya Shanduro iyi ichava huru kuvandudzika kuti muturikiri frontend inowanikwa, uye isu hatina kuisa zvinodiwa paIndaneti ichi yedu kukura Nzvombo http://trac.transposh.org/wiki/milestones/0.7. Munhu wose anoda kukanganisa rinotevera shanduro nokugashirwa aongorore uye vataure wiki Vasai peji kuti kana kuumba tikiti kwatiri. Tichakurukura chikumbiro chimwe nechimwe uye edza kuti aenderane riiswe papurogiramu.
On dzimwe nhau, tinoda kukutendai Colnect, mupinduriri itsva yedu kubatsira munhu vps itsva Transposh izvo zvichaita tinotarisira kuti nzvimbo kuenda zvishoma nokukurumidza. Hatina hwakaedzawo kushandisa cloudflare kuvandudza basa redu, Zvisinei tiri vatorwa zvawanikwa pamwe kuti, saka kana uri kuva chero matambudziko kuwana nzvimbo iyi, ndapota kutiudza.
Last pamusoro wenyaya, ane Arifa shanduro plugin yedu blogger ari mabasa, kana uine nzvimbo pamusoro blogger uye vanoda kuwedzera shanduro pazviri, chete nesu runhare.
Ina Under: Release zviziviso, Software Updates Tagged With: 0.7, blogger, shandurudzo google, zvikuru, kuduku, rusununguko, trac, Wordpress plugin
chengeta “trac” yezvakaitika dzedu
Zvita 11, 2009 kubudikidza chipo Leave a Comment
Nzira yakanakisisa mberi riri tichibatsirwa munharaunda, uye taida kuti munhu wose azive zviri kuitika uye chii nzira yakanakisisa kuti arambe ari zvatiri kuita.
Kana uri mukomana aishandisa uye uchida kuti nokukurumidza rutsigiro uye kuti akaziviswa pamusoro zvaitika itsva, inzwa wakasununguka kutevera tiri Twitter.
Kana uchida kuva zvakawanda munharaunda, vanoda kubatsira vamwe uye kudada ne nzvimbo yako uchishandisa transposh, zvino tine peji iri Facebook.
Kana uchida kuziva kuti Developers kuita, ziva nezvekuuya nyaya vasati vasunungurwa uye kazhinji vanoda kurarama pamupendero, kutevera yedu trac nzvimbo trac RSS.
Kana muchida kutevera zviziviso panzvimbo ino, ari RSS chiratidzo (kana pasi, kana panguva yako Browser kero mutsetse) ndiye shamwari yako. Uchawana zvokudya ichi mumutauro rauri kushandisa.
Comments munogara kugamuchirwa zvakare (uye tinoedza vadzorerwewo nokukurumidza sezvo zvatinokwanisa). Kana uine vamwe mazano / ideas / mazano / witty romukova okuremekedza – chete ngatiregei kuziva.
Ina Under: General Messages Tagged With: Facebook, RSS, mumagariro, trac, Twitter